Cabsida bannaanka ee nimankii godka – Kaasho Maanka
Koox dad ah ayaa qol mugdi ah lagu xereeyay. Waxaa la siiyay shumac yar (oo aan dhamaanayn) si ay iftiin uga helaan; sidoo kale na waxaa ay haystaan sahay ku filan cimrigooda inta ka hadhsan. Qolku waxaa uu ku dhexyaallaa xayndaab weyn oo isaguna gudcur ah, oo ay dhaxan iyo dabaylo darani ka dhacayaan. Waxaa loo sheegay, haddii ay albaabka furaan ama ay damcaan in ay qolka dibada uga baxaan in dhaxantaasi ay layn doonto, dabayshu na ay ka bakhtiin doonto shumaca ay ilayska ka helayaan.
Mudo kolkii ay dugsigoodii ku jireen shumacoodiina ay bidhaansanayeen. Ayaa mid ka mid ahi yidhi, “Derbigan inagu xeeran maxaa ka shisheeye? Ma dhici kartaa in dabaylaha iyo dhaxantu ay xeyndaabka uun ku kooban yihiin, oo derbiga dhiniciisa kale aynu ka heli karno ilays, hooy iyo dhul qolkan yar ka waasacsan?” Mid ka mid ah kooxdii ayaa weedhahan saaxiibkii ka soo yeedhay aad u dhibsaday, waxaa na uu ku eedeeyay in shaqsiga weydiimahan la yimi ku talojiro in shumaca yar ee ay bidhaansanayaan uu ka demiyo, dhaxanta na oodda kaga soo qaado. Waxaa uu yidhi, “Saaxiibkeen waxaa uu la yimid arin halis badan! Waxaa uu kooxdii ka dhaadhiciyay in ninka weydiimahan la yimi uu aayahooda duulaan ku yahay. Ugu danbayntiina waxaa ay qudha ka jareen ninkii weydiimaha la yimi si ay ilayska yar iyo diirimaadka ay haystaan u ilaashadaan.
Mudo dabadeed ayaa shaqsi labaad waxaa ku soo maaxday weydiimihii saaxiibkii galaaftay. Waase uu ku dhici waayay in uu afka ka yidhaado, waayo wuxuu ka warqabaa wixii uu saaxiibkii la kulmay. Talo ayaa ku cuslaatay. Mudo wuxuu sidii xaal ahaadaba, markii danbe waxaa uu go’aansaday inuu weydiimaha maankiisa ka guuxaya qaab kale u dhigo isagoo ka taxadiraya inaan lagu eedayn in uu halis ku yahay kooxda qolka. Waxaa uu yidhi, “Qolyihii qolkan yar innagu soo xereeyay, ee shumacan yar ina siiyay, ka warama haddii aan ka codsano in ay xaalada qolka wax ka bedelaan? Ama aynu weydiisano shey shumaca ka ilays roon?” Isla kii ninkii hore arintiisii gaashaanka u daruuray ayaa kooxdii ka dhex kacay. Waxaa uu yidhi, “Saaxiib, waxa aad tahay imaanlaawe aan ku qanacsanayn dugsiga iyo ilayska la siiyay, xaggee baad ka heli lahayd shumac aad iftiinsato iyo hooy aad gabadanada kaga gabato haddii aanay kuwa meesha ina keenay deeqdaa iyo naxariistaa kuu fidin?” Doodii ayuu sii watay wuxuuna yidhi, “Miyaanad arkayni dhaxanta iyo gudcurka inagu xeeran?” “Miyaanad arkaynin xayndaabka weyn ee lama dhaafaanka ah ee inagu wareegsan?” “Miyaanad arkayn dabaylaha iyo duufaanta dhacaysa ee haddii albaabka aynu furno inagu habsan doonna, ilayskan yarna innaga bakhtiin doona?” “Miyaanad si miyir qabta u fekerayn, mise waxaad tahay mid araga iyo maqalkuba ay daboolan yihiin?”
QORMO LA XIRIIRTA: Mu'miniinta iyo Maxaysatada!
Su’aal (waa shaqsiga weydiimaha la yimid e) doodan uu saaxiibkii la yimi waa ay u cuntami weyday, waxaa na uu saaxiibkii u bandhigay in uu laba weydiimood uga jawaabo:
B- Sababta ay keenayaashu (waa qolada dadka qolka ku soo xereeyay e) u doorteen in ay kooxda ku albaabaan qolkan yar ee ay halistu ku xeeran tahay?
T- Maadaama cid isku deyday in ay derbiga ka gudubto oo ku fashilantay aysan jirin, waxa hubantida ka dhigay in aan derbiga laga gudbi karin?
Gaashaanle (waa ninka ciddii weydiin la timaadaba afka jabsada e) waxaa uu si kalsooni leh ugu jawaab celiyay in Keenayaashu ay si cad u sheegeen in aad derbiga laga gudbi karin, ciddii isku deydaa in ay ka gudubtaana ay naftooda iyo nafaha kale ba galaafan doonto. Waxaa kale oo uu tilmaamay in ay talowanaag tahay in qofkii isku daya in uu arinka derbiga tijaabiyo bulshada laga dhex qabto, oo intii uu dadka kale galaafan lahaa khasaaraha isaga lagu koobo. Waxaa uu yidhi, “Talada Keenayaasha ayaa badbaado inoo ah, ciddii taladooda damacdana in ay ku gacanseydhaa na waa cid anaga oo dhan duulaan iyo halis nagu ah.”
Dad badani waxaa ay u riyaaqeen doodda Gaashaanle, qaar kale na waxaa ay ka gam’i waayeen oo maankooda gilgishay weydiimihii Su’aal. Waxaa bilawday in dad badani ay ku dhiiradaan oo wax iska weydiiyaan xaalka qolka. Qaar badan waxaa lagu fuliyay awaamiirta Keenayaasha oo madaxa ayaa laga guray. Mudo waxay xaaladu cakirnaato, kolkii danbe waxaa la isla soo gaadhay heer ay suurogal noqon weyday in xeerarka Keenayaasha la meelmariyo. Ugu danbaytiina waxaa la isla soo gaadhay heer la joojin kari waayo dadka intii rabtay in ay albaabka furaan isku na dayaan in ay xayndaabka weyn ka gudbaan. Gaashaanle waxaa uu kooxdiisa u bayaamiyay in Keenayaashu ay wax walba ka warqabaan oo aysan inta taladooda qaadacday u ciqaabi doonin inta ka hor timid awgeed.
Waxaa la joogaa arooryo koox dad ah oo aan aad u badnayni ay albaabka furi doonaan. Waxaa jirta cabsi ba’an iyo welwel faro badan. Waxaana la isweydiinayaa waxa dhici doona. Dadka qaar waxaa ay isku dayeen in kooxdan dabarka goosatay ay hor istaagaan, waxaana ay isigu dareen, wacdi, waano iyo hanjabaadba. Albaabkii ayaa la furay kooxdii rabtay in ay baxdaana iyaga oo qaybtood ay cabsi ka muuqato ayay ilinka ka baxeen. Mar alaale iyo markii albaabka la furay ayaa dabayl daran iyo dhaxani qolkii soo gashay, inkastoo aysan shumacii bakhtiin waa ay gilgishay, waxaana ay diiqad gelisay kooxdii qolka ku hadhay. Si degdeg ah ayay albaabkii u xidheen. Waxaana ay ku dhawaaqeen iyagoo ku celcelinaya, “Keenayaashoow, waad na aragtaan in aanu arinkaa bari ka nahay; waxaad tihiin ku xigmad badan oo cadaalad darada ka hufan, ee amardiidka Dabargoostayaasha dartii ha noo wax yeelaynina.”
Kooxdii dabarka jaratay arin sahal ah lama aysan kulmin. Waxaa ka horyimi dabaylo, gabadano iyo gudcur aad u cabsi badan. Qaybtood waxaa ay qaybtii kale ku canaanteen in ay hoddeen oo habeen baas ay talo baas ka gadeen. Qaybtood waxaa ay ka qoomamoodeen oo ay nafahooda ku canaanteen in ay qolkii dugsiga iyo ilayska lahaa ka falaagoobaan. Waxaa loo kala jabay saddex kooxood: koox go’aankooda ku hal-addaygay oo dhexda u xidhay in ay derbiga ka gudbaan, koox dib u garwaaqsaday doodihii Gaashaanle oo go’aansatay in ay dib ugu laabtaan qolkii, iyo koox labalaaboowday oo bartii ay joogeen dhana uga kici waayay. Kooxda saddexaad waxaa ay yidhaadeen ka gudbista derbiga iyo ku jirista qolku waxaa ay ka siman yihiin oo labadoodu ba ay ku soo afgo’ayaan dhimasho, kolkaa haddii ay mar walba natiijadu dhimasho tahay annaga oo aan derbiga iyo qolka toona isku hawlin ayaanu bartaa aanu joogno geerida ku sugi. Kooxdii go’aansatay in ay derbiga ka gudbaan waxa ay kacaa-kufto oo jilbaha iyo xusuladu mudhxaanba waxaa ay ka gudbeen derbigii.
Mar alaale iyo markii ay derbiga dhiniciisa kale gaadheena waxa ay indhaha ku kala qaadaan in derbiga ay ka soo gudbeen uu yahay qol kii hore ka yara waasacsan, shumaciisuna kii qolka hore uu xoogay ka yara dhalaal roon yahay. Waxaa kale oo ay ka war heleen in derbi kale oo dhaxan iyo gudcur ay ceegaagaan uu ku xayndaaban yahay midka ay ka soo gudbeen. Ugu danbayntiina waxaa ay u kala jabeen laba kooxood, koox weydiimo ka qabta derbigan cusub waxa ka shisheeya oo doorbidaya in ay dhinaciisa kale ka war doonaan iyo koox ku doodaysa in aanay arintaasi waqti lagu lumiyo iyo halis loo galo toona mudnayn; in aanay derbiyadu dhamaadba lahayn, oo ay haboon tahay in ay derbigan ay soo gaadheen degaamaystaan. Waxaa ka dhex dhashay Su’aal iyo Gaashaanle cusub waxaa na ay galeen marxalad la mid ah mida ay sheekadani ku bilaabatay.
W/Q: Cumar Cali 5th July 2018